Khaatumo: Mashruuc Lagu Gumaadayo Nuur Axmed – make music movie Edition: International | Video
Published On: 6 June 2012 9:56 pm Articles / Editors Choice / Wararka | By Taleex Media Khaatumo: Mashruuc Lagu Gumaadayo Nuur Axmed
Tan iyo intii la bilaabay mashruuca Khaatumo ma jirto cid ay waxyeelo gaarsiisay aan ka ahayn beesha Nuur Axmed.
Ka hor intaan la bilaabin mashruuca Khaatumo Nuur Axmed gude iyo debad hormar muuqda oo dhinaca arimaha bulshada gaar ahaan waxbarshada ayaa ay ka hirgaliyeen Taleex.
Ardayga ka soo baxa fasalka sideedaad ee dugsiga Taleex waa uu ka aqoon sareeyay ardayda kale marka ay soo galaan dugsiga sare ee Laascaanood taasina waxaa sabab u ahaa jaaliyada oo awooda saartay sidii loo kobcin lahaa aqoonta ubadka degmada Taleex.
Hase ahaate markii Khaatumo timi iyadoo uu mashruucanina wato nin qoru balse iska soo horaysiiyay rag magac iyo miisan ku leh beesha gudaheeda sida Dr Cali Ciise Cabdi. ayaa waxaa ay dhaawac weyn gaarsiiyeen wada jrikii iyo hormarkii reer Taleex.
Dhibaatooyinka Khaatumo u Gaystay Nuur Amxed
Waxbarashdii Taleex oo istaagtay ka dib colaad sokeeye oo la kala dhexdhigay reer Taleex.
Xubno miisaan culus lahaa oo si weyn uga dhex muuqday hormarinta Taleex oo lagu dilay amar ka soo baxay hogaanka mashruuca Khaatumo.
Taleex oo aan waligeed colaad sokeeya ka dhicin ayaa maanta kala qadan dabka.
Isku duubnidii Jaaliyadaha oo la kala diray.
Dhaqaalihii waxbarashada ay jaaliyadu ku kaabayeen oo istaagay.
Dhibaatooyinkaas iyo kuwa kale oo aan halkan lagu soo koobi karin ayey reer Taleex ka dhaxleen mashruuca Khaatumo
Bal waxaad dib u milicsataa muddada uu jiro mashruuca Khaatumo inta qof ay kooxda Khaatumo gacantooda iyo amarkooda ku dileen:-
11 bishii December 2011 waxaa la dilay Jaamac Aw Cali Shire iyo Mubaarik Saalac Cali oo wiil iyo adeerkii ahaa waxaana isla weerarkaa lagu dhaawacay seddex qof oo kale oo mid ka mid ahaa saxafi doonayay in uu soo duubo mashruuc hormarineed oo uu Jaamac ka fuliyay Taleex. Xog badan oo la helay ayaa muujinaysa in amarka dilkaasi ka soo fulay xubnaha G6.
17 Bishii December 2011 waxaa si bareer ah loogu dilay Taleex Kayse Muuse Deri oo ahaa madaxii maaliyada ee gobolka Sool. Kayse waxaa uu masuul ka ahaa Kastamka Tukaraq waxaana dilay nin qori ka soo qaatay maleehsiyada Axmed Karaash. Kayse Alle ha u naxariistee waxaa uu is hortaaagay in Axmed Karaash isbaaro (jidgooyo) dhigto agagaarka Tukaraq xiligii Puntland laga soo baaciyay. Balse si riyadaasi u rumawday ayaa waxaa la khaarajiyay Kayse ka dibna waxaa maanta rumawday riyadii ahayd in Axmed Karaash ka taliyo Tukaraq.
Ali Bacaw ayaa horaantii sanadkan ku dhintay Taleex ka dib markii hantidiisii ay dhaceen maleehiyada Axmed Karaash waxaana uu ninkaasi u dhintay ciil maadama markii uu weydiistay in la siiyo lacagtii uu ku lahaa maleeshiyadaas oo ay kaga qaateen qaad loogu jawaabay “Idigoo laangaab ah miyaa lacag na weydiinaya, yaan xabad madax kaaga jidinee iga hor dhaqaaq” hadalkaas oo damiirkiisi damqay ayuu Cali carradii u dhintay.
5tii bishan June 2012, waxaa la dilay Faroweyne Axmed Juqdhaw waxaana dhaawac soo gaadhay dhawr kale oo ka mid ah dhalinyarada reer Tukaraq, waxaana weeraray seddex gaadhi oo laba ay iska leeyihiin qoyska Axmed Karaash midna uu watay Mahad Cambaashe Inaadeerkii. Weerarkaasi oo gaadma ahaa ayaa dhacay niskii dambe ee habeenimo. Rag badan ayaa ku dhiman lahaa oo reer Tukaraq ah haddii uusan soo gurman lahayn Faysal Maxamed Xasan Falaalug oo ka damqay sida naxariis darada ah ee ragga hurday xabada loola dhacayay. Ujeedadad weerakuna waa iska caddeyd oo waa in ay beesha Axemd Karaash la wareegto Tukaraq oo ay muddo ku taamaysay taasina waa tan dhacday oo maanta Tukaraq looga saaray wixii ku abtirsanayay magaca Nuur Axmed.
Mashruuca Khaatumo in uu Nugaal ka hirgalo waxaa sabab u ahaa Dr Cali Ciise Cabdi mana qabsoomeen shirkii Taleex haddii uusan la socon isaga maadama mulkiilaha mashruucan, Cali Khaliif, uusan wax sumcad ah gude iyo debadba ku lahayn beesha Dhulbahante dhexdeeda.
Cali Ciise waxtarkiisa waxaa uu noqday in uu mar waliba beesha Nuur Axmed u tacsiyadeeyo iyadoo tii u dambaysay ee doraad uu iska soo horaysiiyay Cabdi Bile Cabdi isla markaan xidhiidh la soo sameeyeen si wada jir ah odayaal reer Tukaraq ah balse ku hungoobay ka dib markii ay diideen in ay la hadlaan Dr Cali Ciise.
Khaatumo waa mashruuc ujeedooyin badan leh oo ninba siduu doonayo u adeegsado, Axmed Karaash oo tabanayay colaad kala dhaxaysa Cabdisamad Cali shire oo ka soo baaciyay Puntland ayaa u deegsaday in uu ku kala qaybiyo Nuur Axmed si uu mandaqada Nugaaleed awoodiisa uga muuqato oo ana looga daba hadlin.
Waxaa kaloo uu u adeegsaday mashruuc muddo dheer ay ku taamaysay beeshiisu oo ahaa la wareegida deegaanka Tukaraq maadama ay beeshiisu laamiga ka durugsan tahay 85KM si ay wadada laamiga oo dadka qaar u yaqaaniin in ay tahay dekad boos uga helaan ayaa ay culays badan galiyeen Tukaraq, Waxaana sahlay maanta adeegsiga Khaatumo.
Khaatumo waxtarkeedi dhinaca Nugaal waxaa uu noqday gumaad ka dhan ah Nuur Axmed hase ahaate waxa aynu sugnaba waa waxa ka dambeyay doona qabsashada Tukaraq.